Ngwaahịa Egwuregwu Ngwaahịa Peeji Element | Martech Zone
Ihe Ngosiputa Ngwa ahia gi nke Ecommerce
N’oge na-adịghị anya anyị nyeere aka ebe nrụọrụ weebụ e-commerce na-ebuli ọnụnọ weebụ ha. Ha nọ na sọsọ sọftụwia na-arụ ọrụ nke mere na ha nwere usoro ọrụ mmepe iji bulie ogo ogo ogo ogo. Agbanyeghị, ọbụlagodi igbochi ụzọ ndị ahụ, enwere ohere dị ukwuu dịkwuo akakabarede udu. Anyị weghachitere ụlọ ọrụ ahụ iji mee ka ọdịdị na ihu igwe dị ọhụrụ, anyị guzobere olu nke nwere ikike ma bụrụ onye a tụkwasịrị obi, anyị nyekwara ha aka ịmaliteghachi ntanetị weebụ ha na ozi email iji bụrụ ndị na-agagharị agagharị. Ihe si na ya pụta bụ ntụgharị ntụgharị karịrị 23% afọ dị elu karịa year na naanị mgbanwe ndị ahụ.
Mgbe ụfọdụ ụlọ ọrụ na-ejide onwe ha ma na-erikpu ha na ihe niile ha kwesịrị ime kama ịrụ ọrụ na ndepụta nke ihe ha nwere ike imezi. Ọ bụla mma na-agbakwụnye… na ka ị na-eme ka onye ọrụ na-azụ ihe ahụmahụ karia ma ndị nọmba nwere ike inwe nnukwu. Maka onye ahịa a, ọnụọgụ ndị ahụ nwere ike ịmepụta ọtụtụ nde dollar na njedebe.
N'elu Ahịa Ecommerce Ngwaahịa Page Elements
Ezie na m huru infographic a n'anya, ha nwere ike ichefuo otu ihe di nkpa n’ebe anakpo e-commerce n’ozuzu ha… an nchọta n'ime ụdị! Ọtụtụ ndị ọrụ ga-abanye na ibe ngwaahịa site na ọchụchọ, mmekọrịta mmadụ na ibe, ma ọ bụ mgbasa ozi mana ngwaahịa ahụ nwere ike ọ gaghị abụ ihe ha na-achọ. 30% nke ndị ọbịa nke saịtị ecommerce ga-eji nyocha dị n'ime
Onu na Nyocha
Atụmatụ Ratings Schema
Ebufe Mbupu ma ọ bụ Mbupu efu
Tagnye ọnụahịa Schema Tag
Tinye na ụgbọ ibu ma ọ bụ Zụrụ bọtịnụ
Tinye Ndepụta Ngwa
Bọtịnụ Ekekọrịta Ọha
N'okpuru N'ogige atụrụ Product Ihe
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ụlọ ọrụ na-anwale ton ma nweta nsonaazụ dị egwu, lelee peeji ngwaahịa Amazon. Echere m na ụlọ ọrụ na-abụkarị ihe ihere banyere ịgbakwunye atụmatụ na arụmọrụ na ibe ngwaahịa ha. Ozi ndị ọzọ, nke ka mma. Ikwesighi ime ka ndi nleta gi gha acho ebe di anya ichota ihe ha choro ime ka izu ahia.
Ngwaahịa SKU / Koodu
Dị Ọcha na Mfe Gụọ Akara ókwú
Zuru ezu Ahịa Nyocha
Mpempe akwụkwọ nyocha iji hapụ nyocha
Tụkwasị na Akara
Ajụjụ Ndị A Na-ajụkarị (Ajụjụ)
Nkwa nke akwụkwọ ikike
Ihe Nleta Ngwaahịa n'okpuru
Anyị na-akwadoro ihe gbasara Anyị njikọ iji mee ka ndị mmadụ gaa na peeji nke na-egosi ọdịiche dị n'etiti ụlọ ọrụ gị na ndị asọmpi gị. Foto nke ndị ọrụ gị, ụlọ ọrụ gị, na ụdị ọrụ ebere ọ bụla ma ọ bụ agụụ mmekọahụ ị nwere kwesịrị ịnọ ebe ahụ iji tinye aka na ha.
Nhọrọ Ndị Ahịa Ndị Ahịa
Njikọ iweghachi iwu, usoro nkwụghachi ụgwọ, na iwu mbupu
Njikọ na peeji nke isi Ngwaahịa
Njikọ nke Companylọ Ọrụ Social Media Peeji
Ihe SEO maka ihu Ngwaahịa
Nchọpụta ọchụchọ chọrọ ka arụpụta ma anya ma meta iji rụọ ọrụ nke ọma na ibe gị. Ọbụnadị iji isiokwu nta, okwu nkwuwa okwu, na nke mesiri ike mesie ike ịgbanwe ihe.
Na-ebuli Aha Peeji
Ebuli Meta Nkọwa
Aha nke ngwaahịa na H1 Kpido
Ngwaahịa Foto Alt Tags
Njikwa Achọgharị Google (Webmasters)
Nhazi URL Enyi na Enyi na Enyi
Ngwa Ahịa Ngwaahịa Ecommerce
Edere aha mkpado dị n'elu, mana mkpado Opengraph maka njikọta mmekọrịta mmadụ na ibe ya dịkwa mma ịnwe ka ị nwee ike ịkọwapụta foto, aha na nkọwa nke ngwaahịa ahụ mgbe ịkekọrịta n'ịntanetị.
loading Ọsọ nke Peeji ahụ
Budata Ebook na Ngwa Peeji Ngwa
Nke a bụ nkọwa info zuru ezu site na 99MediaLab, 49 Design Ele gị Product Ihe Page Ga-enwerịrị:
Tags: 99medialabibe ecommerceihe ecommerce peeji nkepeeji nke ngwaahịa ecommercengwaahịa nkọwa peeji nkendepụta ngwaahịaNgwaahịa peeji nke